LibreOffice keessatti hojjechuun, galmicha ammaa akka miltoo ergaa-e tti erguu ni dandeessa.
LibreOffice sagantaa ergaa-e ke durtii bana. Yoo galmee ammaa sagantaa ergaa-e kan birootiin erguu barbaadde, Meeshaale - Dirqalee - Intarneetii - Ergaa-e waliin fayyadamuuf saganticha filachuu ni dandeessa.
Sagantaa ergaa-e ke keessa, fudhataa, dhimma fi barruu kamiyyuu ida'uu barbaaddu galchiiti, achii ergaa-e cha ergi.
Haalan yoo ergaa-e fudhataatti erguu barbaadde kan masoojjii dhangii Galmee Banaa dubbisuu hin dandeenye qofa qabu, galmee ammee erguu dhangii qophaa'inaa yeroo hundaa keessatti.
Galmee barruu, Faayilii - Ergi - Galmee akka Maayikiroosoofti Woordii. Wardiidhaaf, Faayilii - Erguu - Galmee akka Maayikroosooft Ekseelii. Dhiyyeessadhaaf, Faayilii - Erguu - Galmee akka Maayikiroosooft Paaworpooyintii.
Yoo galmee akka faayilii dubbisqofa erguu barbaadde, Faayilii - Erguu - Galmee akka PDF.
Ajajni kun galmee ammee kee hin jijjiiru. Garagalchi ammaafii qofatu uumamee ergama.
Title is: Akka Ergaa-e tti Galmeewwan Erguu